တဦးတည်းအဖြေ: အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အားသွင်း, ပုံနှိပ်ပါသိမ်းဆည်းထားပါ
ဘယ်လိုနိုင်ပါတယ် သတင်းစာများ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများ၏အသက်အရွယ်အတွက်အမြတ်အစွန်းကျန်ကြွင်း?
အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ pundits အားလုံးသတင်းအွန်လိုင်းဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သင့်မသာနှင့် newsprint အဆိုပါဒိုင်နိုဆောကဲ့သို့အသေဖြစ်၏ထင်ပါတယ်။
အထဲတွင်, Arkansas ပြည်နယ်ဒီမိုကရက်ပါတီ-ပြန်တမ်းထုတ်ဝေသူ Walter Hussman သည်သူ၏စက္ကူအမြတ်အစွန်းဖြစ်ဆက်လက်ဘယ်လိုရှင်းပြသည်။
အဆိုပါပုံသေနည်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: စာရှုသူများအမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံပေးဆောင်စက္ကူနှင့်ကုမ္ပဏီများဖတ်ရှုဖို့ subscription ကိုအခကြေးငွေပေးဆောင် - ကောင်းသောပိုက်ဆံ - မဟုတ်ရင် newsprint ခေါ်နိမ့်နည်းပညာပစ္စည်းပစ္စယအဖြစ်လူသိများစက္ကူ, ဟုတ်ကဲ့စက္ကူအတွက်ကြော်ငြာရန်။
အဆိုပါ pundits သူသည်မိမိလက်ကိုအပေါ်အနက်ရောင်မှင်ချစ်သောသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Hussman စာတမ်းများရိုက်ထုတ်သူတုတ်ထံမှအချို့သော Hicks ကြောင်းကို sniff စိုးရိမ်. နှင့်အညီ, ကောင်းစွာသူ့ကိုငါကိုယ်တော်အဘို့ဟောပြောပါလေစေပါလိမ့်မယ်:
"ဒါကကျနော်တို့ပုံနှိပ်ဖို့ wedded နေတချို့ဒဿနအငြင်းအခုံမပြုဖြစ်ပါတယ်" ဟု Hussman ခဏပြန်က CNN သို့ပြောကြားခဲ့သည်။ "ပုံနှိပ်ပါညာဘက်ယခုဒေါ်လာအတွက်ယူဆောင်လာတယျ။ " အွန်လိုင်းပုံနှိပ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာပေးဆောင်ခဲ့လျှင်, သူက "ငါစာနယ်ဇင်းရှာလို့ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ", ဖြည့်စွက်
ငွေကိုဘယ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပုံနှိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက္ကူ၏ပုံနှိပ်ဗားရှင်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ - တကယ်တော့ပင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာများ၏အသက်အရွယ်အတွက်အများဆုံးသတင်းစာများနေဆဲပြသကြော်ငြာများမှမိမိတို့ဝင်ငွေအကြမ်းဖျင်း 90 ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လေ့လာမှုများသတင်းစာများထိုသူတို့အဘို့အလွန်ကိုအားသွင်းလို့မရဘူး, ဆိုလိုတာကလူအများစုအွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေကိုလျစ်လျူရှုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဝင်ငွေခြင်္သေ့ရဲ့ဝေစုနေတုန်းပဲပုံနှိပ်ထံမှလာဒါကြောင့်ပါပဲ။
အမှုအရာများ၏အွန်လိုင်းဘက်များအတွက်သကဲ့သို့, ဒီမိုကရက်ပါတီ-Gazette ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အခြား key ကိုစက္ကူရဲ့ website ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ paywall ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ (ကြှနျုပျတို့အားလုံးကြောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံကိုမြင်ရပါတယ်သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအခမဲ့လုပ်ပါလျှင်, အွန်လိုင်းကြော်ငြာကနေဝင်ငွေသက်တံ့ရဲ့အဆုံးမှာရွှေအိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လမ်းကိုပြန်အများဆုံးကိုအခြားစာတမ်းများကတော့ထင်ယောင်ထင်မှားအောက်တွင်ရှိနေဆဲသောအခါ 2002 ခုနှစ်တွင်အဲဒီမှာထားခဲ့ပါတယ် ထွက်။ )
ဒီမိုကရက်ပါတီ-ပြန်တမ်း 3500 အွန်လိုင်း-သာစာရင်းပေးသွင်းထားသူမဟုတ် 170,000 တစ်နင်္လာမှသောကြာပုံနှိပ်စောင်ရေ (တနင်္ဂနွေ 270,000) နဲ့စက္ကူများအတွက်ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။
သို့သော်ပုံနှိပ် subscriber များအားဝက်ဘ်ဆိုက်မှအခမဲ့ရယူသုံးစွဲပါ။ သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်ချင်ပါသလား? စက္ကူမှ Subscribe ။ ခိုင်ခံ့သွား - အစစ်အမှန်ဤသို့ငွေရှာပေးနေ - တနည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရက်ပါတီ-ပြန်တမ်းယင်း၏ပုံနှိပ်စက္ကူကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရန်၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသည်။
အခပေးက်ဘ်ဆိုက် "ကယ့်ကိုငါတို့သညျကိုပုံနှိပ်စောင်ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးခဲ့တယ်" Hussman ကပြောပါတယ်။ "ငါတကယ်၎င်းတို့၏ယခင် subscriber များအားအခမဲ့အွန်လိုင်းများအတွက်စက္ကူအတွက်အရာအားလုံးရနိုင်သောကြောင့်, စာတမ်းများအများကြီး၎င်းတို့၏ပုံနှိပ်စောင်ရေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြလို့ထင်ပါတယ်။ "
Conan Gallaty, စက္ကူရဲ့ website ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, စက္ကူမှာသူနဲ့အခြားသူများ paywall အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်ပထမဦးဆုံးမှာကဆိုသည်။
သို့သော် Gallaty ပုံနှိပ် subscriber များအားဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်မိန့်တော်မူ၏ဒီမိုကရက်ပါတီ-ပြန်တမ်းမကြာသေးမီခေတ်ရေစီးကြောင်း bucked နှင့်ခိုင်ခံ့သောက၎င်း၏စောင်ရေထားရှိမည်သိရသည်။
"နောက်ဆုံး 10 နှစ်ငါတို့သည်အခြားစျေးကွက် 10-30 ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါက်မြင်ကြပြီသော်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးနေ့စဉ်နှင့်တနင်္ဂနွေစောင်ရေအတွက်တည်ငြိမ်ကျန်ရစ်ပါတယ်," Gallaty ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ paywall "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနှိပ်စောင်ရေထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
Hussman ဒီကထပ်ပြောသည်: "အဆိုပါဘောဂဗေဒဟာပုံနှိပ်သတင်းစာနှင့်အတူနေဆဲပါ။ "
ဒါဟာအစ 2011 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၎င်း၏ paywall စတင်ခဲ့သည့် The New York Times သတင်းစာကအလုပ်ခံရမယ့်တစ်ခုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ပုံနှိပ်ပါ subscriber များအားဝက်ဘ်ဆိုက်မှအပြည့်အဝရယူသုံးစွဲပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်သူများအခမဲ့ 20 ဆောင်းပါးများကိုတစ်လ get ထိုနောကျမှပေးဆောင်ရပါမည်။ ရလဒ်ယခုအချိန်အထိအားတက်စရာဖြစ်ပါသည်။ စက္ကူရဲ့ website တွင် traffic အတွက် paywall စိုက်ထူခဲ့သည်ပင်ပြီးနောက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဒီတော့တက် Sum ပါစေ: မယ့်အစား newsprint စတင်ဖျက်သိမ်းနှင့်အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာကွာပေးခြင်း၏, အမြတ်အစွန်းများအတွက်ပုံသေနည်းပြောင်းပြန်ဟန်: ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်သတင်းစာနှင့်တာဝန်ခံပုံနှိပ်ထားပါ။
အဘယျကွောငျ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ pundits ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ကြရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ ဤ-ပါလိမ့်မယ်ပရောဖကျမြား (မရှင်းပြသည်) မှားယွင်းနေခဲ့ဖြစ်နိုင်ပါသလား
Feature ကိုဇာတ်လမ်းများများအတွက်ဂရိတ် Ledes ရေးထားလုပ်နည်း
ဒီနေရာတွင်တစ်ခုသင်အထင်ကြီးသတင်းစာပညာ Clip Portfolio Build နိုင်သလားဘယ်လိုဖွင့်
ပဋိညာဉ်တရားကိုကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဗာဆိုင်း၏စာချုပ် - ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အများကိန်းပြင်သစ်အကြောင်းအရာ Pronoun Nous vous Ils Elles
အပေးအယူအခန်းက္ပ Play ကိုသင်ခန်းစာ
အခမဲ့ဂျက်ဇ်ဂီတနှင့်အခမဲ့ကြံဆတီထွင်မှု: အ Difference ကဘာလဲ?
Sunnylands, 1966, အ Rich နှင့်နာမည်ကြီး၏နေအိမ်
တစ်ဦး Scorpio က Man ၏နှလုံးအနိုင်ရမည်ဟုလုပ်နည်း
မြေယာ Biomes: သမမြက်ခင်းပြင်
10 နာမည်ကြီးရော့ခ်စတား ​​'' Pre-Fame တေးဂီတအဖွဲ့များ
အကောင်းဆုံးစကားလုံးများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်အလေ့အကျင့်: Denotations နှင့် Connotations
ဘယ်လို (နှင့်အဘယ်ကြောင့်) ကက်သလစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏သင်္ကေတပြ Make
ထိပ်တန်း 20 Sub Pop ဂီတအယ်လ်ဘမ်များ